Kremil-S Extra Strength® (ခရီးမေးလ် အက်စ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Kremil-S Extra Strength® (ခရီးမေးလ် အက်စ်)
Kremil-S Extra Strength® (ခရီးမေးလ် အက်စ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Kremil-S Extra Strength® (ခရီးမေးလ် အက်စ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Kremil-S Extra Strength® (ခရီးမေးလ် အက်စ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Kremil-S Extra Strength ကို အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်မှာ
အစာအိမ်နာ၊ အစာအိမ်ရောင်၊ အစာရေပြွန်ရောင်၊ အစာမကြေခြင်းတို့နှင့် ဆက်စပ်သည့် အစာချေအက်စစ်များသည့်ရောဂါများတွင် လက္ခဏာများသက်သာအောင် သုံးပါသည်။
လေပွလေနိုင်ဆေးအဖြစ် အက်စစ်များခြင်းနှင့် ဆက်စက်သည့် လေပွခြင်း၊ လေအောင့်ခြင်းများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်၏။
H2 Blocker သို့မဟုတ် ပရိုတွန်ပန့်ပိတ်ဆေးများနှင့် တွဲဆက်ကာ အစာအိမ်နာ အလျင်အမြန်သက်သာစေရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Kremil-S Extra Strength® (ခရီးမေးလ် အက်စ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Kremil-S Extra Strength အား ရေမပါပဲနှင့် ၀ါးစားပြီးမျိုချ၍သော်လည်းကောင်း ရေနှင့် အလုံးလိုက်မျောချ၍သော်လည်းကောင်း ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် ပမာဏနှင့်အချိန်အတိုင်း သောက်ပါ။
Kremil-S Extra Strength ကိုမသောက်ခင် အညွှန်းကို သေချာဖတ်ပါ။
အညွှန်းတွင်ပါသည်များကို သေချာနားမလည်ပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Kremil-S Extra Strength® (ခရီးမေးလ် အက်စ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Kremil-S Extra Strength ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Kremil-S Extra Strength ကို ရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Kremil-S Extra Strength ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။)
Kremil-S Extra Strength အား အိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချတာမျိုးအား မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကိုမလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့်အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ရာ အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Kremil-S Extra Strength အားရေခဲသေတ္တာထဲ၌ သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်သောကြောင့် အေးခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Kremil-S Extra Strength® (ခရီးမေးလ် အက်စ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါတို့ရှိနေလျှင် Kremil-S Extra Strength အား မသုံးခင် ဆရာဝန်ကို ပြောပါ။
ဓာတ်မတည့်ခြင်း – Kremil-S Extra Strength ၊ ၎င်းတွင်းပါသော ပစ္စည်းများနှင့် မတည့်လျှင်၊ ထိုပစ္စည်းများကို အညွှန်းစာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။.
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Kremil-S Extra Strength® (ခရီးမေးလ် အက်စ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Kremil-S Extra Strength® (ခရီးမေးလ် အက်စ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
တခြားဆေးများကဲ့သို့ပင် Kremil-S Extra Strength တွင်လည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ချို့ ရှိပါသည်။ အများစုမှာ ဖြစ်တာရှားပြီး နောက်ထပ်ကုသမှုခံရသည်အထိ မဖြစ်ပါ။ သို့သော် သင့်၌ဆေးသောက်ပြီးနောက် ပြဿနာများ ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကိုတင်ပြရန် အရေးကြီးပါသည်။
တစ်ချို့သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ –
ဘယ်ဆေးတွေက Kremil-S Extra Strength® (ခရီးမေးလ် အက်စ်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
Kremil-S Extra Strength သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့်တခြားသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓာတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သော ဆေးဝါးဓာတ်ပြုမှုများ မဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံး၏စာရင်းကိုပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။ ဥပမာ –
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Kremil-S Extra Strength® (ခရီးမေးလ် အက်စ်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလား
Kremil-S Extra Strength က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓာတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓာတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓာတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Kremil-S Extra Strength® (ခရီးမေးလ် အက်စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Kremil-S Extra Strength ၏ ဆေးပမာဏနှင့်ပါတ်သတ်၍ ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
တစ်ချို့ဖြစ်ရပ်များအတွက် ရည်ညွှန်းပမာဏမှာ အစာစားပြီးတိုင်း သို့ အိပ်ယာဝင်ချိန်တွင် ၁-၂ ပြား သောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်း သောက်ပါ။
ကလေးတွေအတွက် Kremil-S Extra Strength® (ခရီးမေးလ် အက်စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Kremil-S Extra Strength® (ခရီးမေးလ် အက်စ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Kremil-S Extra Strength ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
၀ါးစားနိုင်သည့်ဆေးပြား – Aluminum Hydroxide 356 mg, Magnesium Hydroxide 466 mg and Simethicone 20 mg.
Kremil-S Extra Strength ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါက လွတ်သွားသောအကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင် သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ မတျ 27, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း မတျ 27, 2018